heralokhabar::प्रेमको भ्रम अनि यथार्थ - heralokhabar
September 19, 2019 2:39 pm, हेरालाे खबर
सृजना लामिछाने, काठमाण्डाै ।
हो! जिउने क्रममा प्रेम जुनसुकै कारणले पनि आवस्यक पर्दोरहेछ ।। घरबाट टाढिएको कुरा र परिवारको प्रेमलाई अर्को कुनै माध्यमबाट पुरा गर्ने क्रममा मैले पनि कसैलाइ प्रेम गर्न थालेको रहेछु। प्रेम सबैसंग हुन्छ तर युवा अवस्थामा हुने केटाकेटी बिचको प्रेममा आकर्षण पनि हावी हुनेरहेछ। अझ आधुनिक जमातमा त केटि साथी नहुनेलाई चाहिँ बोलिचालिको भाषामा नामर्द भन्थे केटाहरु । मैले पनि आफुलाइ मर्द प्रमाणित गर्न कसरत गरेकै हुं भन्नुपर्छ। जिन्दगीमा कहिले केटिसाथी नबनाएको मान्छे म काठमाडौ आएपछि पहिलो पटक कलेजमा शिखासंग नै बोलेको थिए र पहिलो प्रेम नै शिखा बनेकी थिइ मेरो। सामान्य परिचय बाट हाम्रो दोस्ती सुरु भएको थियो र हामि बीच एक प्रेमी प्रेमिकाले पुरा गर्नुपर्ने सबै औपचारिकताहरु पुरा भैसकेका थिए। अझ भनौं केही हद पार गरिसकेका थियाैं हामी । एक छिनको ककटेल कुराकानी, नम्बर एक्चेन्ज, फेसबुक च्याट, अनि डेट सायद आधुनिक प्रेम यसैलाई भन्छ्न क्यारे! हामी कलेज दिनमा त्यति भेट्दैनथ्यौ, तर प्रत्येक शनिबार हाम्रो दुई जनाको समय हुन्थ्यो। गाउँमा हुँदा लजाउने म काठमाडौ आएपछि कति खुलिसकेको थिए कहिलेकाही हिसाबकिताब गर्थें। यो सबै परिवेशले सिकाएको कुरा जो थियो।
ठिकै छ उसले जे गरे पनि मनमा उसप्रतिको झुकाब भने कहिल्यै समाप्त हुने छैन । उसले फोन नगरे पनि म सम्झन्छु के भोर? आफैलाई ढुक्क बनाएँ मैले ।
सम्बन्ध सुमधुर रुपमा अगाडि बढ्दै थियो, भनिन्छ बिश्वासले नै सम्बन्धलाई दिगो बनाइराख्दछ । हो म पनि यहि सिद्धान्तले अभिप्रेरित थिएं। अझ भनौं म उसलाई आँखा चिम्लेर बिश्वास गर्थें। दुई महिना जति भयो उसले मसंग अलिक फरक ब्यवहार देखाउन थालेकी थिइ। तर मलाई खासै फरक लागेन। आखिर सुरुसुरुमा जस्तो त कहाँ भैरहन्छ र प्रेम सम्बन्ध । तर किन त उसले अचेल मलाई त्यति सम्झिन्न जति पहिले सम्झिने गर्थी? आफै सग प्रश्न गरेँ। ठिकै छ उसले जे गरे पनि मनमा उसप्रतिको झुकाब भने कहिल्यै समाप्त हुने छैन । उसले फोन नगरे पनि म सम्झन्छु के भोर? आफैलाई ढुक्क बनाए मैले । उ पहिले भन्दा अलिक ब्यस्त भएकी त हो । हो उ अचेल प्राइभेट बैंकमा जागिरे भएकी छ । ठिकै छ अब म उसका लागि समय दिन्छु । उसको छुट्टिको दिन कतै घुमाउन लैजान्छु म । यहि सोचेर म मिठा सपना देख्ने आशामा भुसुक्क निदाए। भोलिपल्ट बिहानै उसले फोन गरि, लगभग दुई हप्ता पछि मोबाइलमा उसको फोनको रिङ्गसगै फोटो देखियो म खुसिले फुरुङ्ग भए। `हेल्लो सन्चै छौ? चिया भयो? के गर्दै छौ आजभोलि?´ पहिलेकोभन्दा फरक लवजले म अलि झोक्किएं। के सार्हो बिजि हो? एक कल सम्झिन पनि अचेल त….`अनि सुन न तिमिसग भेटेर एउटा जरुरि कुरा गर्नु थियो´ उसले मेरो वाक्य पूरा हुन नपाउदै हतारिलो जवाफ मा भनी । म अलि सचेत हुँदै भने के कुरा हो? हम हम बिहेको कुरा हो क्याहो बेबि, म नगर्ने है बिहे तिमिसग अलि जिस्किदै निर्दोष झै गरिदिए। `त्यस्तो केही होइन, तिमिलाइ म पर्सि शनिबार भेट्छु, अरु केही काम त छैन नि? ´ छैन छैन भए पनि म तिम्रो लागि समय निकालिहाल्छु नि । अनि सुन न म पनि शनिबार तिमिलाइ `surprise date´ मा लैजान्छु सोचिराको तिमी आफैंले पो कुरा निकाल्यौ त । `whatacoincidence baby´ मैले खुसी भएको पारामा भने । `ल ल म अफिसको तयारी गर्छु अहिले राखे´ यति भनेर उसले फोन काटी । बिहान साढे सात बजिसकेको थियो । र पनि म शनिबार उसलाई भेट्ने समयको कल्पना गर्दै फेरि निदाए।
जिन्दगीमा पहिलो पटक महसुस गरे कि शब्द को कम्पन कति सम्म शक्तिशाली हुदो रहेछ। चारैतिर अध्यारो लाग्यो, शरिर काप्न थाल्यो। कहिल्यै कल्पना नगरेको कुराले सहनै नसक्ने पिडा दिदोरहेछ ।
`हेल्लो गुड मर्निङ, अझै उठ्या छैन क्याहो? म त रेडि भैसके त´अत्याउने शैलिमा उसले बिहानै फोन गरि। शनिबार भएर म मस्त सुतिरहेको थिए । घडी हेरे, ८ बजेको रहेछ । `अनि आजको प्लान बिर्सेको´? उसको प्रश्नले म अलि तर्सिए जस्तो भए। अनि सम्झिएं आज बाहिर पो जानू छ उसग। ल ल म आधी घण्टामा तयार भएर निस्किन्छु, अनि सुन त कहाँ जाने हो? `आज स्वयभु जाने ल´ ओहो, के के न तयारी गरौं सोच्या त त्यही पो, ल ल म बीस मिनेटमा निस्किए। म न खुसी र निराशको लयमा ओके भनेर फोन राखे । वास्तवमा मलाई उसग अलिक धेरै समय बिताउन मन लागेको थियो । वा अलिक टाढा जाने मन थियो। तर पनि म यतिकैमा खुसी भए किनभने उसग दुई महिना पछि भेट हुँदै थियो । हामी जमलमा भेट्यौं र लैनचौर हुँदै सोर्हखुट्टेबाट बनस्थलिको बाटो स्यम्भु पुग्यौं । उसले त्यतिन्जेल मलाई हेरेकी सम्म थिइन । सिदै मेरो बाइकबाट ओर्लि, चस्मा खोलि र `मुभ अन´ भनी । तर जब पार्किङमा मैले बाइक राखेर हेर्दा सम्म उ अलि पर पुगिसकेकि थिइ | मलाई उसको अनुहार पढ्न मन लाग्यो तर उसले मतिर हेरिन कि हेर्न चाहिन मैले बुझ्न सकिन | हामि दुबै चुपचाप उकालो लाग्यौ | अब उसलाइ देखेर मेरो शरिर गर्हौ हुन थाल्यो | सधै मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो अगालोमा टासिन आउने उ आज मलाई देख्दा किन अपरिचित जस्तो गरिरहेकि छे भनेर अडकल गर्न सकिन ।
जति नै आधुनिक सोच लिएर हिड्ने मानिस पनि अप्ठ्यारो आइलागेपछी भगवान र भाग्यको हिसाबकिताब राख्न थाल्छ्न
केहि माथि मानिसहरु सिक्का फालेर मनोकामना पुरा गर्ने होडबाजीमा हल्ला गरिरहेका थिए तर आफ्नो मनमा आफ्नै खुल्दुलिले आफैलाइ नमज्जा सग थर्काइरहेको थियो । अलिक माथि पुगेपछि रफ्तारमा बादर शिखाको नजिक आयो । उसले मेरो हात समाउन पुगि र मलाई हग गरि । त्यो क्रम रहिरह्यो । एक्कासि उ मलाई हग गरेर रुन थालि । बिहानै भएकोले सबै ठाउँमा भिड थिएन र अरुले के भन्लान भन्ने डर भएन । मैले पनि उसलाइ अंगालोमा कसे तर के भयो भनेर सोध्ने हिम्मत आएन्। उस्को रुवाइ अलि नौलो लाग्यो । त्यसको गाम्भिर्यताले उसले कुनै ठुलै कुरा ब्यक्त गर्न खोज्दैछे भन्ने अनुमान मैले गरे । उस्को आसु देख्न सकिन, नरोउ भन्न पनि सकिन।
यतिकैमा उसले हाम्रो मौनतलाइ चिर्दै बोलि `शिशिर अब हामि छुटिनु पर्छ्´। यि शब्द कानमा भन्दा पहिले मेरो मुटुमा सुनिन थाले । मुटुको चाल तिब्र हुन थाल्यो। जिन्दगीमा पहिलो पटक महसुस गरे कि शब्द को कम्पन कति सम्म शक्तिशाली हुदो रहेछ। चारैतिर अध्यारो लाग्यो, शरिर काप्न थाल्यो। कहिल्यै कल्पना नगरेको कुराले सहनै नसक्ने पिडा दिदोरहेछ । परिवारको निर्णय र बाध्यता देखाउदै उसले कार्ड्वाला केटासग बिहे गरिकन, अर्को हप्ता अमेरिकाको फ्लाइट रहेको कुरा भनी। `जीवन यस्तै रहेछ शिशिर उसले यि भन्दै गर्दा म भने उसगका सपनाहरुको स्पष्टीकरण खोजिरहेको थिए तर मनभित्रै मात्र। `शिशिर आफुलाइ सम्हाल, सायद हामि भाग्यमा रहेनछौं´ कुनै बेला सानो कुराले मन दुखेर मेरो अङालोमा रुने उस्ले मलाई कसरी भन्न सकिरहेकी होलि सम्हाल आफुलाइ। ११ बजिसकेको थियो, शिखा पनि रोइरहेकी थियी, त्यो भन्दा बढी हाम्रा सामुहिक सपनाहरुले हामिलाइ रुवाइरहेका थिए । आखिर मैले पनि त छिटटै बिहे गर्ने भनेर बिदेश नजाने, नेपालमै केही गर्ने सहमतिमै जागिर खान प्रयासरत थिए नि। आखिर किन यत्रो धोका दियौ शिखा, मेरा निर्दोष आसुले सोधिरहेका थिए तर बोली निस्किएन । म अचेत जस्तै भएको थिए, उसले जाउ भनिरहदा मलाई तिमी जान सक्छौ भन्ने सम्म पनि बोली आएको थिएन र उसग त्यो छोटो यात्रा तय गर्न पनि मन लागेन । म केही बोलिन,पछाडी फर्किदा उ त्यहाँ बाट ओझेल परिसकेकी थिइ ।
मलाई उसलाई भेट्न मन लागेन । बिदाइ गर्न एअरपोर्ट आउन भनेकी थिइ तर मलाई उसको अनुहार हेर्न मन लागेन। उसले मलाई छोडेरै कसैसँग नयाँ यात्रा तय गर्ने हिम्मत गर्न सक्छे भने किन अब म पनि जिउने हिम्मत नगर्नु ?
जति नै आधुनिक सोच लिएर हिड्ने मानिस पनि अप्ठ्यारो आइलागेपछी भगवान र भाग्यको हिसाबकिताब राख्न थाल्छ्न, शिखाले पनि यो भन्दा अघि कहिल्यै भाग्यको कुरा गरेको सुनिएन । उसले जिन्दगीमा सुखको बाटो रोजेकी थिइ, चोखो प्रेमको हत्या गरेर, सबै बाचाहरु बिर्सिए जस्तो गरेर । हो उसले अरुलाइ नै रोजेकि थिइ, मलाई एउटा अपरिचित जस्तै बनाएर। उसलाई पनि त म सम्झेर रुने दिन कसो नआउला र जति आज म रोएको छु । एक हप्ता आफैलाइ गलाएर बितेछ ।कति कमजोर भैसकेछु म! आज त शनिबार! शिखाले नेपाल छोड्ने दिन, म अनि त्यो भन्दा बढी हाम्रो बिगतलाइ छोडेर जाँदै थिइ। र हाम्रो ४ वर्षको सहयात्रालाइ मेटाएर जाँदै थिइ। मलाई उसलाई भेट्न मन लागेन । बिदाइ गर्न एअरपोर्ट आउन भनेकी थिइ तर मलाई उसको अनुहार हेर्न मन लागेन। उसले मलाई छोडेरै कसैसँग नयाँ यात्रा तय गर्ने हिम्मत गर्न सक्छे भने किन अब म पनि जिउने हिम्मत नगर्नु ? अब भुल्नुपर्छ उसलाई, उ सगंका यादहरु। जिवनमा धैर्य नगरी बाटो बदल्नेहरुको के पछुतो गर्नु । अब पछुतो छ त केवल आफै सगं । उसले आफुलाइ सुनेर प्रेम गरि र परिवारको आग्रह अस्विकार गर्न नसकेर बाटो मोडि । यसमा दोष न मेरो थियो न उसको । वास्तवमा जीवन एक्लै रमाउने हो रहेछ । बीच बिचमा भेटिनेहरुको भर नहुदोरहेछ। आफू अनुकुल सम्बन्ध निभाउदा रहेछ्न मान्छेहरु। यो प्रेम भन्ने कुरै यस्तै रहेछ, नभेटिनुपर्ने सग भेटिने अनि छुट्नुपर्ने ।।